Izinkolelo Zendabuko zeNtwana
KuNtwana, imvula akuyona nje umthombo wenyama wokuvuselelwa. Kuwuphawu lokuzala okungokomoya kanye nesibonakaliso sokuthi imvelo nomphakathi ziyavumelana. Ukuze kuqinisekiswe ukuthi ukuqhutshwa kwe-cosmic kuqhubeka kahle, izinkonzo zemvula zenziwa minyaka yonke.
Ngaphambi kwalesi senzakalo imvula ifunwa ngokusebenzisa uphawu lwezinyoni zomlilo (tladi). Ekholelwa ukuthi uyi-eagle inhlanzi yaseCape, le nyoni ihlukaniswa nempaphe yayo ebomvu, emhlophe nemnyama. Kukholelwa ukuthi inyoni yombani ibanjwe ngaphakathi kwezinto okuthiwa i -dimadima, uphondo lwezinkabi oluhlotshaniswa ukuze lufane nenyoni enezingqimba ezibomvu, ezimhlophe nezingumnyama.
I-nedima isetshenziselwa kakhulu abadwebi besilisa nabesifazane (ngaka noma i-mapale) ukuba bacele imvula ezoqinisekisa ukuthi ukuvuselelwa kokuvundile kokubili komhlaba nomphakathi. I-Ntwana inemibono ephikisanayo mayelana nemifanekiso yokuzala. Isibonelo, umbala obomvu uthathwa kokubili njengesibonakaliso sokuthi fecundity and danger.
Umkhanyo ubhekwa njengesibhakabhaka semvula, kodwa iNtwana nayo ikholelwa ukuthi ingase ibanjwe ngabathakathi futhi iqondiswe kabi ukuze iguqulwe umyalelo wokuphila ovuthiwe. Ngokufanayo, abesifazane, abanomthwalo wokubambisana kokubili komhlaba kanye nesisu, nabo babhekwa njengezingsongo ezingase zibe khona empilweni yomphakathi.
Lokhu kuqhutshwa komzimba kubonakala ngokuhlobana phakathi kwabesifazane nezinkomo. Bobabili bahlonishwa futhi baphikisana omunye nomunye. Zombili ziyimpawu zokuzala futhi zombili zimelela usongo emandleni omunye nomunye wokuzala. Isibonelo, abesifazane abesesikhathini bavinjelwe ezikhungweni zezinkomo.
Isizathu salokhu ukuthi, uma abesifazane abangenalutho bengena ngaphakathi, isimo esifanayo sizowela izinkomo. Abesifazane babhekwa ngokuthi 'baphephile' kuphela emva kokuya esikhathini sokuya esikhathini, lapho belahla wonke amabhande abo abhontshisiweyo, ngaphandle kwebhande eliphansi kunazo zonke.
Uma i-pink ithathwa njengokumelela inhlanganisela ebomvu neyomhlophe, umbala ubonisa ubulili futhi, ngokusho, ukungathathi hlangothi okungenangqondo. Lokhu kusikisela ukuthi iNtwana yakha ubuhlobo obunzima kakhulu, obuvame ukungaboni ngaso sonke isikhathi, phakathi kwemibala ethile, izinto kanye nezakhi ezibalulekile ekusindeni kwabo kokubili emaceleni nangokwenyama.
Imibala ihlotshaniswa nezimo zokushisa nokupholisa, ubumsulwa nengozi, okusiza ukunikeza iNtwana ulimi olufanisayo olusiza ukwenza umqondo wezwe ovame ukubonwa njengento engacacile, enonya futhi ehlala njalo.